Asehon’Ireto Lahatsary Ireto ny Fahalotoana sy ny Faharavana Ateraky ny Fitrandrahana Goavana ny Harena An-kibon’ny Tany ao Filipina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Aogositra 2016 9:09 GMT
Dikasarin'ny lahatsarin'ny Tatelimby (drone) iray mampiseho ny fiantraikan'ny toeram-pitrandrahana iray ao amin'ny faritanin'i Zambales. Sary avy amin'ny lahatsary YouTube an'i UNTV
Hitan'ny governemantan'i Filipina ho manana ny toerany manokana amin'ny fampiroboroboana ny toe-karem-pirenena ny fitrandrahana harena ankibon'ny tany. Noho ny fandrisihana nomen'ny governemanta ireo vahiny mpampiasa vola dia mibosesika ny asam-pitrandrahana tao anatin'izay taona vitsivitsy izay.
Nitombo kely ny vola azo avy amin'ny hetra sy ny famoronan'asa vonjimaika any amin'ny vondrom-piarahamonina saro-dalana, saingy any amin'ny farany ambany ihany ny fandraisana anjaran'ny toeram-pitrandrahana eo amin'ny toe-karena. Misy aza ny mpikaroka sasany niteny fa tsy misy dikany mihitsy ny anjara toeran'ny indostrian'ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany amin'ny fanafoanana ny fahantrana. Ny ratsy indrindra aza dia miteraka fakom-pitrandrahana miavosa izany, izay manapotika [mg] ny zavamananaina any amin'ny faritany maro, ary mamindra toerana ireo vazimba teratany hiala amin'ny tanindrazany.
Mihamitombo ny isan'ireo mponina niharany, vondrona fampitam-baovao, mpandala ny tontolo iainana manangona tahirin-kevitra amin'ny fanimbana vokatry ny fitrandrahana harena ankibon'ny tany. Mampiasa finday ary tonga hatramin'ny fampiasana tantelimby (drone) ireo mpanangom-baovao sy mpanao gazety fanadihadiana hampisehoana ny fandravana ateraky ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany amin'ireo riandrano sy ony ao amin'ny firenena.
Ao amin'ny faritanin'i Zambales, miorina ao amin'ny nosy lehibe indrindra ao amin'ny firenena, naaton'ny governora ny toeram-pitrandrahana rehetra noho ny fitarainana amin'ny fandotoana sy ireo zavatra tsy ara-dalàna ataon'ny orinasam-pitrandrahana. Ampangain'ny governora ho manambaka (na mitrandraka, samy dikany amin'ny teny anglisy) ny faritany tao anatin'ny 75 taona ireo orinasam-pitrandrahana ireo nefa vao maika mihalalina kokoa ny fahantran'ny vondrom-piaraha-monina misy ireo toeram-pitrandrahana. Tsipahin'ny orinasam-pitrandrahana izany fiampangana izany.
Nampangainy mihitsy aza moa ireo orinasam-pitrandrahana ho manondrana ny vato sy ny tanin'i Zambales mankany Shina izay voalaza fa nitaky ny ampahan'ny fari-dranomasina Shina Atsimo. Ampangain'i Filipina i Shina ho manitsakitsaka [mg] ny maha-iray tsy mivaky ny fari-dranomasin'ny Firenena ao amin'ny Ranomasina Shina Atsimo (naotin'ny mpandika teny: na Ranomasina Filipina Andrefana hoy ny ao an-toerana).
Nitsidika an'i Zambales ny tambajotram-pampielezam-baovao UNTV hanamarina izany fanambaran'ny governora izany. Nampiasa tantelimby (drone) ny orinasa handraketana ny fiantraikan'ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany ao Zambales. Hita ao amin'ny fandraketan-dahatsary ny faharavan'ny havoana sy lohasaha ao amin'ny faritany.
Mandritra izany fotoana izany ny mpanao gazety Pia Ranada namoaka lahatsary fohy amin'ny asam-pitrandrahana harena an-kibon'ny tany ao Surigao. Ity faritany ity dia mioorina ao amin'ny faritra Caraga ao amin'ny nosy Mindanao, renivohitry ny fitrandrahana harena ankibon'ny tany ao amin'ny firenena.
Ahariharin'ny lahatsary mazava izay tena tsy mety ateraky ny indostrian'ny fitrandrahana: ny loharanon-karena mineraly dia alaina avy eny an-tendrombohitra ary apetraka mivantana ao amin'ny lakana sy sambo ary entina avy hatrany any amin'ny firenen-kafa hodiovina sy hokarakaraina. Milaza ny mpikatroka fa manamafy orina ny fandrobàna sy ny fampahantrana ireo faritra ambanivohitra ao amin'ny firenena ny indostrian'ny fitrandrahana mitodika avy hatrany mankany amin'ny fanondranana ireo akora vao nosokirina.
Ao amin'ny faritanin'i Agusan, ao amin'ny faritra Caraga ihany koa, mpisera YouTube iray hafa no namoaka lahatsary fohy amin'ny fako navelan'ny fitrandrahana goavana:
Ao Cantilan, mbola ao amin'ny faritra Caraga ihany, ampangain'ny lohandohan'ny mponina ao an-toerana mandoto ny rano ny orinasam-pitrandrahana iray:
Noho ny fitombon'ny trangan-javatra sy voina ary ny faharavana hita maso nateraky ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany manerana ny firenena, dia maro ny nanomana fihetsiketseham-panoherana tao amin'ny firenena tao anatin'izay taona vitsivitsy izay. Ny marina dia fantatra amin'ny fanoherana ireo fitrandrahana goavana ny sekretera vaovao misahana ny tontolo iainana ao amin'ny governemanta. Naaton'ny filoham-pirenena vaovao ihany koa ireo orinasam-pitrandrahana meloka tamin'ny fanitsakitsahana ny lalàna ara-tontolo iainana ao amin'ny firenena.